၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးရည် (၂၀) ​​- ယားယံသောအရေပြားအတွက်ခရင်မ်များ - သင်၏အရေပြားခြောက်သွေ့ပါကဤ Moisturizer များကိုစမ်းကြည့်ပါ
English Muffins လုပ်နည်း
တနင်္လာနေ့တွင်လာလာသော Hyacinth Finale ၏အိမ်
သင်၏နေ့ခင်းလက်ဆောင်နံပါတ် ၇ ကိုလင်းစေပါ။ (နောက်ထပ်) Pw Instant Pots!
ခြောက်သွေ့သောအသားအရေအတွက်အကောင်းဆုံး lotion ၂၀
သင်၏အရေပြားခြောက်သွေ့ပါကဤ Moisturizer များကိုစမ်းကြည့်ပါ
20 Best Lotions Dry Skin
မွေးမြူရေးခြံရှိ Ree Drummond ၏ဘဝသည်သူမဓာတ်ပုံများမှပြည့်စုံပြီးလှပသောပုံဖြစ်ဟန်တူသည်။ သို့သော် Oklahoma သည်ဆောင်းတွင်းလများ၌ရက်စက်စွာအအေးမိနိုင်သည်ကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ ဆောင်းရာသီ၎င်း၏အခွင့်အရေးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်း ကျိန်းသေသူတို့ထဲကတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး! ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊ ခြေထောက်၊ တံတောင်ဆစ်များနှင့်အခြားအရာများကိုသက်သာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသုံးဝင်သောအရေပြားခြောက်သွေ့မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဆီမွှေးကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြေးညှင်းစွာဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။
Ree ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်ကိုမှီပြီးသူမခြေဖမိုး၊ တံတောင်ဆစ်များကဲ့သို့ခြောက်သွေ့သောနေရာများပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်ရေချိုးခန်းမှထွက်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်။ Ree သည်သူမအသုံးပြုသောအဘယ်သို့သောအမှတ်တံဆိပ်ကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသော်လည်းသူမသည်အလွန်လေးလံသောအလုပ်တစ်ခုကိုအမြဲရှာဖွေသည်။ 'ငါကခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်နဲ့တူတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုသုံးမယ်။ သူမတွင်အသုံးချနိုင်သောနည်းစနစ်များပါရှိသည်။ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များကအရေပြားစိုထိုင်းသောအခါရေချိုးခြင်းသို့မဟုတ်ရေချိုးပြီးနောက်ချက်ချင်းလိမ်းဆေးသုံးစွဲရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။
သင့်အတွက်သင့်တော်တဲ့ body lotion ကိုရွေးချယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ အရေပြားယားယံခြင်း၊ အရေပြားယားယံခြင်းများအတွက်လိမ်းဆေးနှင့်လိမ်းဆေးများကိုရှာဖွေရန်ဤပြခန်းကိုလှန်လှောကြည့်ပါ။ သင်၏ခြောက်သွေ့သောနှုတ်ခမ်းကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးရန်မမေ့ပါနှင့် အကောင်းဆုံးနှုတ်ခမ်းသန့်စင်ဆေးဖြစ်သည် အရမ်း!
st Joseph Novena နေ့ ၉
ပြခန်းကိုကြည့်ပါ နှစ်ဆယ်ဓာတ်ပုံများ ၁20 ၏CeraVe အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်walmart.com$ 12.87
ဤအစွန်းရောက်နှစ်သက်သည့်ခရင်မ်သည် Amazon တွင်ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုပေါင်း ၃၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ကောင်းပါတယ် နေ့စဉ် moisturizer နှင့်အထိခိုက်မခံအသားအရေနှင့်အတူလူတို့အဘို့စူပါနူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။
နှစ်20 ၏ဂျိုစီမာရန်အာဂန်ရေနံကိုယ်ခန္ဓာနို့ဓတ်onရာဝတီ$ 36,00
သူမကသူမ၏ခြောက်သွေ့သောအသားအရေကိုသက်သာစေရန်လိုအပ်သည့်အခါ Ree အမြဲတမ်းထိုကဲ့သို့သောခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်ရှာသည်။ ဒီစည်ပိုင်းထဲမှာအဓိကဓါတ်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးတဲ့အာဟာရဓာတ်သည်အစွမ်းထက်သောသဘာဝစိုထိုင်းမှုဖြစ်သည်။
၃20 ၏Eucerin အဆင့်မြင့်ပြုပြင်ရေး lotiononရာဝတီ $ 11.99$ 8.99 (၂၅% လျှော့စျေး)
၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၁၀ ထက်မနည်းသောခိုင်မာသောဆေးဆိုင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ပုံသေနည်းကို ceramides, shea butter နှင့် glycerin တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
၄20 ၏Olay ဆေးသုတ်ဆေးခန္ဓာကိုယ်အေးစက်walmart.com$ 5.97
သင်ရေချိုးပြီးနောက်ပုံမှန်ရေကိုစိုစေပြီးရေချိုးပြီးနောက်ပုံမှန်လုပ်ပါ။ သင်ရေချိုးနေတုန်းဒီဆီလိမ်းဆေးကိုအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ ဒါကအချိန်သက်သာစေသလား။
ဂျိမ်း Garner ၏အမေရိကန်
ဤရွေ့ကားစတော်ဘယ်ရီနှင့် Cream Scones Berry ဟာကောင်းသောဖြစ်ကြသည်
လိမ္မော်ရောင် Cream ဒိန်ခဲဖြည့်ခြင်းနှင့်အတူချောကလက် Crepes
Marlboro က Man နှင့်အင်တာဗျူး
ဒီအနှေးချက်ပြုတ်ကြက်သား Tortilla ဟင်းချိုဒါကောင်းသည်
ဒီနွေ ဦး ကိုပေးပို့ဖို့အကြိုက်ဆုံး Diy အီစတာကတ်များ
လွယ်လွယ် အခွံခွာထားတဲ့ ကြက်ဥပြုတ်လုပ်နည်း
ပင့်ကူတွေကို အိပ်မက်မက်တဲ့အခါ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
စုံတွဲများအတွက်စျေးပေါသော Halloween ဝတ်စုံစိတ်ကူးများ
မုန့်ညက်အစား မုန့်ညက်ကို သုံးနိုင်ပါသလား။
st raphael ထံဆုတောင်းပါ။
2255 နတ်သမီးလေး ဂဏန်းနော်။